Rahoviana ary inona no handefasana hafatra aorian'ny daty voalohany - Fifandraisana
Ny daty voalohany dia vita ary vovoka.
Efa nilaza ny veloma farany ianao ary lasa nandeha nitokana.
Inona no mitranga ankehitriny?
Fantatrao fa mila mandefa sms amin'izy ireo ianao, nefa rahoviana no fotoana mety hanaovana an'izany?
Ary inona no tokony holazainao ao amin'ny hafatrao?
Andao atomboka amin'ny voalohany amin'ireo fanontaniana ireo.
Rahoviana no handefa hafatra aorian'ny daty voalohany
Misy lafin-javatra vitsivitsy izay mety hisy fiantraikany amin'ny hafiriana aorian'ny daty voalohany tokony hiandrasanao alohan'ny handefasana an'io lahatsoratra manan-danja rehetra io.
1. Nanao ahoana ny fandehan'ny daty?
Ny daty voalohany dia mety ho toy ny fihaonana am-pahamendrehana amin'ny mpanjifa miasa na mpitaiza amin'ny oniversite.
Ny hafa dia afaka mahatsapa ho toy ny resadresaka mahazatra amin'ny sakaizan'ny sakaiza amin'ny fety iray.
Tsy mampihoron-koditra izy ireo, saingy tsy mameno anao izany angovo sy fientanam-po amin'ny daty tena tsara izany.
Aza adino ny tenanao - nanao ahoana ity daty voalohany ity?
Ny mandeha ho azy ny resaka ? Nisy fihomehezana ve? Moa ve ianao nahatsapa ny aloky ny simia? Kely fihenjanana eo amin'ny lahy sy ny vavy , na dia?
Raha tsotra ny mahita fa nirehitra toy ny trano nirehitra ianareo roa dia mety te-handefa hafatra haingana kokoa noho ny taty aoriana ianao mba hitazomana ny haavon'ny angovo avo.
Raha izany no daty, fa heverinao fa mety hisy ny fihatsaran'ny zavatra mandritra ny daty faharoa milamina kokoa dia tsy te hiandry ela ianao vao manazava izany aminy.
Raha somary manjombona ilay daty ary tsy hitanao mandeha mankaiza akory izany dia mety tsy mila mandefa sms azy ireo akory ianao.
2. Ahoana no nahalalanao azy ireo?
Ny daty voalohany dia mety manana endrika maro isan-karazany ary mety haharitra amin'ny halavan'ny fotoana.
Nahazo fotoana ve ianao tena mifankahalala ?
Raha nanomboka tamin'ny alàlan'ny fitsangatsanganana tao amin'ny valan-javaboahary iray narahin'ny sakafo hariva avy eo ny fisakaizanao avy eo dia mety ho betsaka ny zavatra nianaranao noho ny hoe tsy afaka mamoaka zava-pisotro vitsivitsy fotsiny ianao amin'ny herinandro.
Raha nandany fotoana ela niarahana ianareo, ny fiatoana kely amin'ny serasera dia ahafahan'ny fiandrasana fivoriana manaraka hanangana indray.
vondrona tovovavy k-pop
Miala andro vitsivitsy alohan'ny handefasanao hafatra indraindray ho tsara hevitra, na dia ireo antony hafa resahina eto aza dia hitranga.
Raha toa kosa, ny fameperana ny fotoana dia midika fotsiny hoe manafoana ny atiny ianao, dia tsara kokoa angamba ny mandefa hafatra amin'ny fotoana fohy mba hanazavana fa te hahita azy ireo indray ianao.
Mety tsy nahavita niditra tao an-dohan'izy ireo (tamin'ny fomba tsara!) Tao anatin'ny fotoana fohy ianao, ary tsy tianao ho hadinon'izy ireo ianao.
Rehefa dinihina tokoa, dia mety amin'ny fampiharana sy tranonkala mampiaraka izy ireo ary manana daty mety hafa nilahatra.
3. Firy taona ianao?
Ny fitsipi-pitondran-tena mampiaraka dia mivoatra rehefa mihalehibe ny olona ary mety hisy fiatraikany lehibe amin'ny fotoana tokony handefasanao hafatra amin'ny olona aorian'ny fiarahanao voalohany.
Amin'ny ankapobeny, ny zokiolona mahazo, ny mahitsy kokoa izy ireo te hanana fifandraisana.
Raha mbola tanora ianao, ny sandan'ny 'fanenjehana' sy milalao azy milay dia mety hidika hoe afaka miandry andro vitsivitsy ianao alohan'ny handefasana hafatra amin'ny datinao.
Fa andramo izany amin'ny olona efa ho 20 taona na mihoatra ary mety ho voaroaka tanteraka ianao.
Amin'ity taona ity dia tena te-handefa SMS azy ireo ianao ny ampitso mba hampiharihary ny fahaliananao azy ireo.
4. Inona no nolazainao tamin'ny faran'ny daty nampiarahanao?
Rehefa misaraka ny daty misy anao, inona no voalaza?
Samy naneho fahalianana mazava ve ianareo tamin'ny daty faharoa? Raha izany dia azonao atao angamba ny mamela azy kely kokoa alohan'ny handefasana hafatra.
Fantatr'izy ireo ny toerana misy azy ireo raha ny mahaliana anao ary manantena aho fa tsy hiasa saina raha tianao izy ireo.
Raha nolazainao azy ireo fa handefa SMS azy ireo ianao mandritra ny herinandro, dia mahaiza mandanjalanja.
Raha nanao veloma ianao ary navelanao tamin'io, dia mila maka lahatsoratra eo ianao eo ho eo mba hanazavana azy ireo ny fahatsapanao fa nandeha ilay daty ary mety (toa) maniry ny handeha amin'ny hafa ianao.
Tokony handefa hafatra mivantana ve ianao aorian'ny daty voalohany?
Amin'ny ankapobeny, tsy tokony mila mandefa hafatra amin'ny daty ny alin'iny ianao nahita azy ireo.
Aleo atrehana, nandany fotoana niarahana kely ianao ary mety samy mbola manamboatra ny daty ao an-dohanao ianao.
Raha lehilahy ianao izay tena mpandala ny nentin-drazana ary te-hanamarina fa tonga soa aman-tsara any an-trano ny tovovavy iray, indrindra raha nandeha fitateram-bahoaka izy ireo, dia mandefasa hafatra fohy tokoa… fa aza manomboka resaka mihoatra an'izany.
Ary amin'izao vanim-potoana maoderina izao, ny ankamaroan'ny zazavavy dia tsy hanantena an'ity karazana lahatsoratra ity, koa aza mahatsapa fa tokony hanao izany ianao mba hitovy amin'ny fiahianao azy.
Aza miandry ela.
Na dia tsy misy fitsipika sarotra sy haingana momba ny fotoana handefasana hafatra aza aorian'ny daty voalohany, tsara kokoa ny mandiso amin'ny lafiny fitandremana sy ny fandefasana lahatsoratra mialoha ny aoriana.
Aleo lavitra jerena toa mailo fa tsy liana.
Raha tsy azonao antoka, dia azo antoka ny filokana amin'ny texte rahampitso hariva.
Raha ny olona sasany mety mahita lahatsoratra ny ampitson'iny somary be loatra, ny maro an'isa dia mety tsy handratra hodi-maso amin'izany.
Aza atao kilalao ary miezaha mafy hanangana fanantenana. Raha tia anao ny olona iray dia tsy rariny ny fampiandrasana azy ela loatra hahalala izany tianao izy ireo miverina .
Inona no handefasana hafatra aorian'ny daty voalohany
Fantatrao izao rahoviana handefa hafatra amin'ny olona aorian'ny daty voalohany, andao hitodika ny saintsika inona tokony ho lazainao amin'ny hafatrao fanarahana.
Ireto misy zavatra tianao hampidirina ao.
1. Lazao azy ireo fa nahafaly anao sy ny niaraka tamin'izy ireo.
Samy te hahalala ny lehilahy sy ny vehivavy rehefa nandeha tsara ny daty.
Tianay ny hahatsapa fa orinasa tsara izahay ary tsy dia naneho firy ny fahasimban'ny rafi-pitaintainana mety ho efa niainantsika tao anatiny.
Atombohy amin'izay ny lahatsoratranao amin'ny filazanao azy ireo hoe nahafinaritra anao ny fiarahanareo.
Mahereza fa tsy ny sakafo sy zava-pisotro na ilay hetsika nankafizinao fotsiny fa izy ireo sy ireo resaka nifampizaranao.
Izany dia hanome lanja ny fahatokisan-tenan'izy ireo ary hahatonga azy ireo hisentoana na hanamaivanana raha manantena ny hahita anao indray izy ireo.
2. Ataovy mazava fa te hahita azy ireo indray ianao.
Aza mikapoka manodidina ny roimemy - lazao fa tianao hisy daty faharoa.
Na ny lehilahy na ny vehivavy dia tsy tia ny manjavozavo amin'ny hafatra manjavozavo. Tian'izy ireo ho fantatra raha mitondra na aiza na aiza izy ity.
Tsy mila mamarana ny pitsopitsony avy hatrany ianao, fa tsara kosa ny mametraka tsara ny hevitry ny daty faharoa amin'ny lohan'izy ireo.
Raha tsara ny valintenin'izy ireo amin'izany dia azonao atao ny manolotra iray na roa andro eo, ary avy eo na miandry fotoana fohy kokoa alohan'ny hidiranao amin'ny antsipiriany.
Ireto hevitra roa voalohany ireto no tena ilainao hampidirina ao amin'ny lahatsoratra voalohany. Te-hihazona izany ho fohy ianao ary hamela ny resaka hivoatra eo.
3. Ampifandraiso amin'ny daty voalohany.
Tian'ny olona izany rehefa misy mahatadidy zavatra noteneniny. Mampiseho izany fa tena nandinika izy ireo fa tsy nihaino fotsiny mba hamaly.
Ka raha miresaka momba ny fitiavan'izy ireo sary ny sakaizanao, dia azonao atao ny milaza fa te hahita ny sasany amin'ny sary tsara indrindra vitany ianao, na manontany amin'ny fomba mahatsikaiky rehefa handray ny sarinao izy ireo.
Na raha nisy zavatra nitranga tamin'ilay daty nahatonga anao roa hihomehy, dia avereno indray izany mba hampatsiahivina azy ireo ny fotoana nifampizaranao.
Nandany zava-pisotro taminao ve ianao? Very ve ianao rehefa niara-namakivaky ny tanàna niaraka?
Lazao zavatra izay mamerina ao an-tsain'izy ireo ny fahatsiarovana ny daty niainanao tamin'ny hazavana tsara indrindra azo atao.
Satria, na dia mety nisy fotoan-tsasatra vitsivitsy aza dia tianao ho tadidin'izy ireo ny fahafinaretana rehetra nananany.
4. Ataovy fohy ny hafatrao, na fitaratra ny zavatra ataon'izy ireo.
Toy ny fitsipika ankapobeny, dia te hitazona ny lahatsoratrao ho fohy ianao ao aoriana sy ho avy azonao aorian'ny daty iray.
Fa aza atao fohy loatra izy ireo. “Hey!” na “Inona no mitranga?” Moa ve tsy lahatsoratra tian'olona horaisina avy amina olona efa niarahany.
Ny fifankahafantarana marina dia tokony hotehirizina ho an'ireo daty manokana, miaraka amin'ny resaka an-tsoratra mifandraika kokoa amin'ny fitazonana izany fifandraisana misy eo amin'ny daty sy ny fandaminana ireo daty ho avy.
Ny maningana an'io fitsipika io dia rehefa manomboka manoratra valiny lava amin'ny lahatsoratrao ilay olona iray hafa.
Raha lasa fanaon'izy ireo izany dia tsy maninona ny manazava an'izany amin'ny hafatrao lava kokoa.
Indrindra fa te hiresaka ny ankamaroany ianao, raha tsy izy rehetra, momba ireo zavatra noresahin'izy ireo tao amin'ny lahatsorany.
5. Aza mandefa hafatra matetika.
Sahala amin'ny tsy te-hanoratra hafatra lava be ianao, dia tsy te ho ilay olona mandefa hafatra tsy miato na mamaly avy hatrany isaky ny mandeha.
Azo antoka, raha miresaka amin'ny sms ianao indray takariva, tsy maninona ny mamaly haingana dia haingana, fa raha mandoko ny manga izy ireo indray andro, dia tsy mila miverina any aminy avy hatrany ianao.
Hahafantatra tanteraka izy ireo raha sahirana ianao ary tsy afaka mamaly amin'izay fotoana marim-pototra ara-potoana.
Tadidio fa tsy mila lahatsoratra hanolo ny tena mampiaraka ianao.
6. Milalao raha mahatsapa voajanahary fa aza soratana amin'ny sexte.
Raha efa niaraka tamin'ny olona iray fotsiny ianao tamin'ity olona ity dia tsy ho ela dia mila miresaka zavatra ara-nofo amin'ny SMS miaraka amin'izy ireo ianao.
Fa tsy maninona ny filalaovana fitia… raha zavatra mahazo aina anao izany.
Tsy ny olon-drehetra no afaka milalao soa aman-tsara, ka aza terena na mampiasa tsipika hitanao amin'ny Internet.
Ara-dalàna fotsiny. Raha nahatsapa fifandraisana izy ireo tamin'ny daty voalohany, dia tsy ho esorina tampoka izy ireo raha tsy afaka milalao amin'ny alàlan'ny lahatsoratra.
Saingy mety hahemotra izy ireo raha manomboka manipy tsipika amin'izy ireo ianao izay toa tsy tena izy ianao.
7. Ataovy maivana ny raharaha.
Raha tena mankafy resaka lalina sy misy dikany momba ny fiainana sy izao rehetra izao ianao dia TSY izao ny fotoana hanombohana.
Ny fandefasana hafatra aorian'ny daty voalohany dia tokony hajanona ho maivana sy mora hamaly.
Ny olona dia tsy te-hamaly fanontaniana an-jatony noho ny lahatsoratra fa te hahafantatra fotsiny fa liana ianao ary mandamina daty faharoa.
Ary aza milaza azy ireo ratsy ny andronao any am-piasana na ny fomba nifamalianao tamin'ny namanao.
Ny zavatra tsara ihany no resahina mba hitazomana ny fiheveran'izy ireo anao tsara.
8. Aza mampiasa emoji loatra.
Indraindray ny emoji na roa dia afaka mampita ny eritreritsika na ny fahatsapantsika ho tsara lavitra noho ny teny mety hatrizay.
Saingy, ary tena lehibe IZAO, tsy tokony ho endrika voalohany andefasan-kafatrao mihitsy izy ireo.
Indraindray, ny lahatsoratra emoji irery dia mety hiteraka fisafotofotoana mihoatra noho ny zavatra hafa rehetra satria azo adika amin'ny fomba samihafa izy ireo.
rehefa maty zoky lahy manomboka
Ka raha ampiasainao izy ireo dia andramo ampidirina ao anaty fehezanteny iray izay maneho mazava izay tianao holazaina.
Na raha mandefa emoji irery ianao dia alao antoka fa mazava tsara ny tianao holazaina. Tsy misy unicorn kisendrasendra na tarehy mibontsina raha toa ka diso vakina izy ireo satria misy dikany hafa.
FAQ hafa momba ny fandefasana hafatra aorian'ny daty
Ankoatra ny hoe rahoviana ary inona no tokony handefasana hafatra, ity misy fanontaniana sy valiny mahazatra mahazatra momba ny fandefasana hafatra aorian'ny daty voalohany.
Ahoana raha tsy mamaly izy ireo na toa tsy liana?
Ah, ny fahanginana mahatsiravina rehefa avy nandefa hafatra tamin'ny olona efa niarahanao ianao.
Na dia etikety tsy mahomby aza ny tsy mamaly mihitsy, dia mitranga izany indraindray.
Ary miaraka amin'ny fandefasan-kafatra maoderina ahafahanao mahita rehefa misy mamaky lahatsoratra dia vao mainka sarotra kokoa amin'ilay olona matoatoa.
Raha nanome azy ireo iray andro na mihoatra hamaly ianao dia manana safidy roa ianao…
… Na ekenao fa tsy liana izy ireo ary milavo lefona amin'izy ireo.
… Na manandrana lahatsoratra iray farany ianao amin'ny fanantenana fa hadinon'izy ireo fotsiny ilay voalohany.
Ny fotoana tokana tokony hisafidiananao ny fomba faharoa dia raha tena nandeha tsara ny daty dia naneho ny fahalianany hivory indray izy ireo, na fantatrao fa tena sahirana tokoa izy ireo andro vitsivitsy.
Fa ahoana raha toa ianao ka mandefa SMS miaraka amin'izy ireo, saingy toa tsy manome ezaka izy ireo ary manome valiny tsy misy dikany?
Eny, io matetika dia famantarana ratsy amin'ny lafiny zavatra mandeha eo anelanelanao.
Ny zavatra tsara tokony hatao dia ny manontany fotsiny raha te handeha amin'ny daty faharoa izy ireo. Manome azy ireo ny fotoana hiteny eny, amin'izay ianao afaka mandamina ny iray, na tsia, amin'izay ianao afaka miarahaba azy ireo tsara sy manao veloma.
Ny olona sasany dia mankahala ny fandefasana hafatra fotsiny, fa mety mbola maniry hahita anao indray. Fomba iray na hafa, ho fantatrao ny toerana ijanonanao.
Tokony handefa bandy bandy bandy aloha ve ny zazavavy?
Valiny fohy: azo antoka, maninona?
Ity no 21sttaonjato maro lasa izay ny tena nahatonga ny lehilahy hanomboka zavatra.
Marina indrindra izany rehefa, araka ny voalaza tetsy aloha, ny olona mihantitra ary te-hiditra amin'ny raharaham-barotra fa tsy hanitsakitsaka kely ny toe-javatra.
Aza manahy ny hisehoany mazoto loatra - tsy misy zavatra toa izany. Ny tovolahy iray angamba ho maivamaivana fa tsy mila manodina ny baolina.
Tokony hiantso ve ianao fa tsy handefa hafatra?
Vao tsy ela akory izay, antso an-tariby no hany safidy mety hiresahana amin'ny olona iray taorian'ny fiarahany voalohany (ankoatry ny fiakarana eo am-baravarany, izay tsy hatolotray velively!)
Saingy nandany ny fandefasana hafatra tato anatin'ny taona vitsivitsy ary ny fiantsoana olona izay vao nifankahita indray mandeha dia hita fa tsy dia mahazatra loatra.
Ny fiantsoana dia mitaky mihoatra noho ny fandefasana hafatra amin'ny resaka fahamaotinana, ary amin'ny ankapobeny tsy dia mora loatra.
Tadidio izay efa nolazaintsika teo aloha: ny tanjon'ny fandefasana hafatra dia ny hahazoana antoka ny daty manaraka ary hitazomana ny fahalianana mandrapahatongan'izany.
Tsy natao hahalalana olona iray, ary na koa miantso.
Azo inoana fa tsara indrindra hisorohana azy.
inona no hatao rehefa miverina izy rehefa nisintona
Hafiriana no tokony hiandrasanao alohan'ny daty faharoa?
Na dia mety hanome azy aza ianao farafaharatsiny andro roa eo anelanelan'ny daty voalohany sy faharoa dia aza avela ela loatra.
Miankina amin'ny fijerin'ny diaranao roa dia tsara foana ny manamboatra daty faharoa ao anatin'ny herinandro voalohany.
Raha nifankahita tamin'ny faran'ny herinandro ianao dia manandrama manao zavatra amin'ny faran'ny herinandro manaraka na mialoha.
Arakaraka ny habetsaky ny fotoana eo anelanelan'ny daty voalohany sy faharoa anao no tsy dia misy ilay daty faharoa.
Mbola tsy azonao antoka izay apetraka ao amin'ny lahatsoratrao? Miresaka an-tserasera amin'ny manam-pahaizana momba ny fifandraisana avy amin'ny Relationship Hero izay afaka manampy anao hahalala zavatra. Tsotra.
Famantarana 9 momba ny mofo mamy + Ahoana ny fomba hamaliana ny olona manao izany
Ahoana ny fomba handosirana ny faritra misy ny sakaiza ary ho tonga bebe kokoa noho ny namana fotsiny
Matahora ny famerenana maty farany mandeha
ahoana ny fahitanao azy
famantarana fa tsy tia ahy intsony izy
ahoana no ahalalako fa misy ankizivavy tia ahy
ny kanto mieritreritra ny orinasanao manokana
inona no vidin'ny addison rae net